Zvese nezve iyo nyowani iOS 11 Control Center | IPhone nhau
iOS 11 inosanganisira chitsama chakanaka chezvinhu zvitsva Zvese zviri zviviri iPhone ne iPad, uye kunyangwe mamwe emabasa akakosha ari eApple piritsi chete, iyo vhezheni ye iPhone zvakare shanduko zvakanyanya mumabasa akakosha seControl Center, iyo skrini yemapfupi iyo kwemakore akawanda kudaro yaive nyeredzi yeJailbreak neCydia.
Iyo skrini yekufupisa kumabasa akadai seWiFi, Bluetooth, mutambi wemimhanzi, kupenya, vhoriyamu, nezvimwe. Inochinja zvakanyanya zvine chekuita neIOS 10, uye kwete chete mune aesthetics. Mapfupi mapfupi uye kunyangwe kugona kugadzirisa mamwe mabhatani kuisa izvo zvatinoona zvakakosha. Tinokuratidza zvakadzama zvakadzama kuti iyo nyowani iOS 11 Control Center inoratidzika sei uye kuti inoshanda sei, kusanganisira vhidhiyo inotsanangura.
1 Dzimwe sarudzo uye yakazara skrini
2 Iyo 3D Kubata inoenderera nekuwedzera mabasa
3 Maitiro ekugadzirisa
4 PaIpad, inosanganiswa ne multitasking
Dzimwe sarudzo uye yakazara skrini
Iyo nyowani Control Center inoenderera ichionekwa nenzira imwecheteyo seiyo iOS 10, ichitsvedza kubva pasi pekona. Unogona kuiratidza kubva pakakiya skrini, kubva kunyorera uye kubva kuchiratidziro chikuru che iPhone yako kana iPad, asi Kusiyana nezvakaitika neIOS 10, muIOS 11 ichagara skrini rese remuchina wako. Zvakare hapana mapeji, ikozvino zvese zvinodzora zviri papeji rimwe chete, haufanire kutsvedza kuti uone zvekutamba zvekutamba kana kuwana macomputer anowirirana neKeKit.
Pakutarisa iwe unogona kuwana ese mapfupi, izvo zvinonyanya kusununguka pane kuve nemapeji akasiyana, sekune iOS 10. Semuenzaniso, ini handina kumbobvira ndashandisa kupinda kweKeKKit kubva kunzvimbo yekudzora, kunyanya nekuti ini handina kumborangarira kuti yaivepo, kusvetukira kurudyi. Ini ndinofarira kuve nesarudzo dzese dzinoonekwa kuti ndizive zvandinogona uye zvandisingagone.
Iyo 3D Kubata inoenderera nekuwedzera mabasa
Zvishoma nezvishoma Apple iri kuwedzera mikana yeiyo 3D Kubata, zvine musoro nekuti kune akawanda uye akawanda madhijitari anosanganisira basa iri rakatanga makore angangoita maviri apfuura neiyo iPhone 6s uye 6s Plus. Ruzivo rwunopihwa nenzvimbo yekudzora yakawanda pane yayo huru skrini, asi kana isu 3D Kubata (tinya zvakanyanya) pane zvimwe zvinhu mabasa anowedzera, kungave kubvumira kudzora kwakanaka kana kutipa rumwe ruzivo. Iyi ndiyo mamiriro neWiFi, Bluetooth zvinodzora ... nezvimwe. Kana tikatsimbirira pachikamu ichocho tinokwanisa kuona netiweki iyo yatakabatanidzwa uye mamwe mabhatani akaita seAirDrop kana Internet Sharing, ayo asingaoneke pachiratidziro chekutanga.
Apa ndipo chaipo pakapotsa kuti Apple yaenda zvishoma zvishoma uye yakatibvumidza kuodha zvekare mabhatani. Bhatani rekumisikidza kana kudzima dhata harina basa kwandiri, nekuti ini handimbo riite (ndinoziva kuti vazhinji venyu makaona denga rakavhurika neiyi bhatani nyowani), uye ndingadai ndaifarira kukwanisa kuchinja iyo nzira pfupi kuti igove Indaneti kana kunyange AirDrop.
Kugadzirisa kupenya uye vhoriyamu yakanakisa kupfuura neiyo huru skrini yekudzora, kana kuwana kuwedzerwa kudzoreredzwa kwemumhanzi mutambi ndedzimwe sarudzo dzinotenderwa ne 3D Kubata, asi pane mabhatani akadai sekuti Usavhiringidze kana iro rine rakatenderera iro risingabatsiri chinhu. painodzvanywa zvakanyanya. Muvhidhiyo unogona kuona ese anogona kuita mabasa. Uye ku Vaya vasina 3D Bata pane chako chishandiso, zvakafanana zvinoitwa nekubatirira pasi nezve nharaunda iwe yaunoda kuwedzera.
Icho chinhu chatave tichikumbira kwenguva yakareba, uye chiri pakupedzisira pano, kunyangwe chikamu chete. Control Center ine zvikamu zviviri zvakanyatsosiyaniswa, chikuru chinogara kumusoro 2/3, uye chimwe chine mapfupi masere anogara ezasi 8/1. Iyo yekupedzisira ndiyo chaiyo chikamu icho Apple chinokutendera iwe kuti ushandise nekuwedzera izvo zvinopinda iwe zvaunoda, uye kubvisa izvo zvisingakufarire. Kubva kuSystem Zvirongwa, mukati meContent Center iwe unogona kugadzirisa ekugadzirisa, nyore nyore. Bvisa, wedzera uye kurongazve ndiyo mikana yatinopihwa, izvo zvisiri zvidiki.
Iwe haugone kuwedzera mapfupi asiri kuoneka mune irwo runyorwa, uyezve haugone kuwedzera yechitatu-bato mapfupi mapurogiramu, nekuti Apple chete inosanganisira yavo. Kana iwe haugone kugadzirisa chero chinhu chinotora yepamusoro 2/3 yeControl CenterNdosaka ndakambotaura kuti Apple ingadai yakaenda kumberi, asi isu tatoziva kuti haisi kambani inowanzo shanduka zvakanyanya kana kupa mushandisi masimba mazhinji.
Kunyanya kutaurwa kwakakodzera mamwe mabhatani matsva atinogona kuisa muControl Center, senge skrini yekurekodha, iyo inozokubvumidza iwe kuti ugadzire vhidhiyo uye ugoigovana kunyangwe nezwi rako, bhatani rekusevha bhatiri iro richakubatsira iwe kutora imwe nguva kubva kubhatiri rako, kana iyo nyowani Usakanganisa mamiriro paunenge uchityaira, izvo zvinogona kukusevha zvinopfuura kamwe chete nekutyisa nekusakutsausa kubva pane izvo zvinonyanya kukosha, mugwagwa.
PaIpad, inosanganiswa ne multitasking
Apple yanga ichidawo kupa yayo yakasarudzika kubata kune iyo vhezheni yeiyo iPad, uye seyizere skrini ine mapfupi mabhatani pachiratidziro chinopfuura 9 inches ingadai yakave chinhu chinoshamisa, yakafunga kusanganisa iyo Control Center neMultitasking. Saka iwe paunoratidza Control Center iwe uchaonawo kuti ndeapi mashandiro ari kumashure.
Iwe uchafanirwa kuita chiito chakafanana kuti umise iyo WiFi sekuvhara zvachose chikumbiro chakaramba chiri kumashure. Nenzira, bhatani reAirDrop rinowanikwa mune iyo skrini yeiyo iPad panzvimbo yeiyo data activation bhatani nekuti iri WiFi-chete iPad. Sezvo iyo iPad isina 3D Kubata, sezvatakambotaura kuti tiwedzere mashandiro emamwe mabhatani iwe unofanirwa kubatirira paari. Idzo sarudzo dzekugadzirisa dzinopihwa neApple muControl Center yeiyo iPad uye iyo iPhone yakafanana chaizvo.
Unoziva zvakasara zve chii chitsva muIOS 11?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Zvese nezve iyo nyowani iOS 11 Control Center
Iyo Wordpress app inovandudzwa neye itsva HTML mupepeti
Phoenix Photo Editor, Go Fitness, Data Widget uye mamwe maapplication nemitambo yemahara kwenguva yakati rebei